Iindlela Ezintandathu Ezilula Zokukunceda Wenze Imali Ngokukhawuleza
Icandelo loShishino oluNcinci lwe-Ushishino lweDummies Cheat Sheet
Into enokuthi iqale njengokuzonwabisa sele iqhakazile kwishishini lakho lokwenza amashishini amancinci. Ngoku unikezela ngemveliso okanye inkonzo yakho kubathengi ngenjongo yokwenza imali. Ezi ndlela zintandathu ziindlela eziqinisekisiweyo zokwenza njalo.
Bhala inqaku ulithengise. Wonke umntu unolwazi kunye nokuqonda okuya kuhlawulwa ngabanye. Unokuhlawulwa ngamanqaku akho kwiindawo, ezinje Umxholo oQhelekileyo kwaye Umxholo onxulumene noko phakathi kwabanye.
Yenza imali ngentengiso ye-Intanethi. Ungaseta ibhlog okanye iwebhusayithi kwaye uvumele intengiso kuyo kwiinkqubo ezinje nge Inkqubo kaGoogle yeAdSense () okanye I-Adbrite . Benza intengiso kwaye babelana ngengeniso nawe njengebhlog okanye umpapashi wewebhusayithi.
Nika iinkonzo zakho ngeenkonzo ezikwi-Intanethi. Nokuba unezakhono zobuchwephesha okanye zolawulo, unokuba luncedo kumashishini anayo loo misebenzi kwaye enze imali. Jonga iisayithi, ezinje Elance , Odesk , kunye Freelancer.com .
Thengisa izinto zakho kwi-intanethi. Uninzi lwabantu lunezinto abanokuzithengisa kwaye bafumane imali. Ungazithengisa izinto zakho ngokukhawuleza kwiziza, ezinje Uluhlu lweCraigslist , eBay , okanye IAmazon . Uluhlu lwezinto (ii) zakho zisimahla okanye azibizi mali ininzi, kwaye uninzi lwabantu luguqule olu khetho lwenza ixesha lesingxungxo okanye ishishini ngokusisigxina.
Bhala i-ebook yohlobo kwiAmazon. Unokwenza ngokulula kwaye ngokukhawuleza ubhale incwadi yohlobo kwaye uyilayishe kuyo IAmazon . Ukuba isihloko sakho sihamba kakuhle kwaye i-ebook yakho inomxholo omkhulu, inokuba yindlela yokufumana umvuzo kuba iAmazon yenza yonke enye into (ukuhambisa, ukuhambisa, njalo njalo) emva kokuba ungenise incwadi yakho.
Sebenzisa iindawo zokudibana. Cofa kwiBank.com kwaye IKhomishini yeJunction zizinto ezimbini ezilula ukuqala ngazo. Amawakawaka abarhwebi ayakuvuyela ukuhlawula wena ukuhambisa okanye iifizi zokubaxhasa ngokuthumela amathemba ngendlela yabo. Unokwenza ukuhanjiswa ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya ukubhala amanqaku (kunye nokubandakanya ikhonkco lokudibana) okanye ukulungiselela ividiyo yeYouTube (ngekhonkco lokudibana kwinkcazo yevidiyo).
yellow fever ukudubula kwesiphumo
Amayeza e-erectile dysfunction ekhawuntarini
ubhala njani i-sonnet
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-alendronic acid
pataday iliso lehla ngexabiso